Tahafo ny Finoan’izy Ireo: Tantaran’ireo Olona Resahin’ny Baiboly | JW.ORG
Tahafo ny Finoan’izy Ireo: Tantaran’ireo Olona Resahin’ny Baiboly
Izy Rehetra Fiezahana Hanam-pinoana Vavaka Famakiana & Fianarana Baiboly Fananana Toetra Tsara Tahafo ny Finoan’izy Ireo
Te hanatanjaka ny finoanao sy ho akaiky kokoa an’Andriamanitra ve ianao? Hanampy anao amin’izany ity andian-dahatsoratra ity. Natambatra ato ny tantaran’ireo lehilahy sy vehivavy nanam-pinoana * ao amin’ny Baiboly.
^ feh. 2 Nampiana tsipiriany vitsivitsy tsy hita ao amin’ny Baiboly ireo tantara ireo, mba hanampiana anao hahazo sary an-tsaina tsara ny zava-nitranga tamin’izany. Nanaovana fikarohana ireny tsipiriany ireny mba tsy hifanohitra amin’izay voalaza ao amin’ny Baiboly, sady hifanaraka tsara amin’ny zava-nitranga teo amin’ny tantara sy ny zavatra hitan’ny mpikaroka ny any ambanin’ny tany.
Loha Hevitra Vaovao Tranainy
Famoronana ka Hatramin’ny Safodrano
Mamelona ankohonana ve ianao sa miezaka mijoro amin’​ny hevitrao satria fantatrao hoe marina ilay izy? Afaka miana-javatra avy amin’​ny finoan’​i Enoka ianao.
Voaro i Noa “sy Ireo Fito Hafa”
Ahoana no nahatonga an’i Noa sy ny fianakaviany ho tafavoaka velona tamin’ilay vanim-potoana nanjombona indrindra teo amin’ny tantaran’ny olombelona?
Safodrano ka Hatramin’ny Fifindrana avy any Ejipta
Hitan’ireo olona ambony tany Ejipta fa tsara tarehy be i Saraha. Mety tsy hampoizinao mihitsy ny zava-nitranga taorian’izay.
Nahoana no tena nety tamin’i Saraha io anarana vaovao io?
Nanam-pinoana i Rebeka sady nanana toetra tsara hafa koa.
Nanadala an’i Josefa foana ny vadin’i Potifara. Ahoana anefa no nandavany azy?
Nahoana i Josefa no sahy nilaza ny dikan’ny nofin’ireo tandapan’i Farao sy ny an’i Farao? Ahoana no nahatonga azy hipetraka tany an-dapa nefa mbola gadra izy ny marainan’iny?
“Izaho Angaha Solon’Andriamanitra?”
Raha lasa miady ny fianakavianao satria ao aminareo misy mialona na mankahala na tsy mena-mivadika, dia afaka manampy anareo ny tantaran’i Josefa.
“Tsy Hanaiky Hivadika Mihitsy Aho”
Nahoana no afaka manampy antsika ny tantaran’i Joba rehefa miatrika olana lehibe isika, na loza, na fitsapam-pinoana hafa?
Joba—Nositranin’i Jehovah ny Ratram-pony
Ho tezitra be i Satana raha tsy mivadika hoatran’i Joba isika, fa ilay Raintsika be fitiavana kosa ho faly be!
Miriama: “Mihirà ho An’i Jehovah”!
Nitarika an’ireo vehivavy israelita hanao hiram-pandresena i Miriama, teo amin’ny Ranomasina Mena. Hita tamin’ny zavatra niainany hoe be herim-po izy, nanam-pinoana, ary nanetry tena.
Fifindrana avy any Ejipta ka Hatramin’ny Mpanjakan’ny Israely Voalohany
Mety hihena ny finoantsika rehefa kivy isika na manana olana. Inona anefa no azontsika ianarana avy amin’i Samoela?
Mpanjakan’ny Israely Voalohany ka Hatramin’ny Nahaterahan’i Jesosy
Jonatana: “Tsy Misy Mahasakana An’i Jehovah”
Toby miaramila iray manontolo no notafihin-dry Jonatana nefa ry zareo roa lahy fotsiny. Nanao ahoana ny vokany?
Nahoana i Davida no afaka nandresy an’​i Goliata? Inona no azontsika ianarana avy amin’​ny tantaran’​i Davida?
Davida sy Jonatana: “Niraiki-po Be Tamin’i Davida” i Jonatana
Tsy nitovy taona ry zareo sady tsy nitovy fari-piainana nefa lasa mpinamana be. Ahoana no nahatonga an’izany? Tianao koa ve raha lasa mpinamana be ianao sy ny namanao? Sa ianao vao mitady namana? Mety aminao ity lahatsoratra ity.
Inona no azon’izay mijaly am-panambadiana ianarana avy amin’i Abigaila?
Niandry i Elia Sady Niambina Hatrany
Tamin’i Elia niandry an’i Jehovah, inona no nataony sy noresahiny rehefa nivavaka izy?
Nampahery An’i Elia Andriamanitra
Fa inona loatra no nahazo an’i Elia no dia nangataka ho faty mihitsy izy?
Niaritra Izy na teo aza ny Tsy Rariny
Efa niharan’ny tsy rariny ve ianao? Tsy andrinao ve ny hanitsian’Andriamanitra an’izany? Diniho ato ny fomba azonao anahafana an’i Elia.
Elia: Niaritra Hatramin’ny Farany Izy
Nanana finoana matanjaka i Elia, ka nahavita niaritra. Hampahery antsika ny tantarany satria miaritra ny mafy hoatr’azy koa isika.
Nahaterahan’i Jesosy ka Hatramin’ny Nahafatesan’ny Apostoly
Tahafo i Maria, renin’i Jesosy, dia ho tafavoaka koa ianao rehefa toy ny “voatrobaky ny sabatra” noho ny alahelo.
Ahoana no ahalalantsika hoe niavaka ny finoan’i Marta, na dia mafy aza ny nanjo azy?
Maria Magdalena—“Nahita ny Tompo Aho!”
Nanam-pinoana be i Maria dia nirahina hanao asa miavaka. Nasaina nilaza vaovao tsara tamin’olon-kafa izy.
Tsy Nivadika Mihitsy i Petera
Nanampy an’i Petera hanaiky ny fanitsian’i Jesosy ny finoany sy ny tsy fivadihany. Ahoana izany?